[Saturday, January 13th, 18] :: Turkiga oo Soomaaliya ka hirgalinaya mashaariic ku kacaya in ka badan $100 million
Ankara (RH) Dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa heshiis iskaashi ku kala saxiixday caasimadda Ankara.
Heshiiska ayaa waxaa kala saxiixday ra’iisal wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Mahadi Maxamed Guuleed iyo dhiggiisa Turkiga Recep Akdag, sidaas waxaa qortay wakaaladda wararka Turkiga Anadolu Agency.
Heshiiskan oo ku kacaya in ka badan 100 milyan oo dollar ayaa salka ku hayaa sidii Turkiga uu mashaariic horumarineed uga hirgalin lahaa Soomaaliya.
Ra’iisal wasaare ku xigeenka Turkiga Recep Akdag oo ka hadlay xafladda lagu saxiixayey heshiiska ayaa sheegay heshiiskan in uu xoojin doonno xiriirka ka dhexeeya labada dal.
Waxa suu saadaaliyey in rajada muuqato ay tahay sidii xiriirka ganacsi ee labada dal uu gaaro $200 million laga soo billaabo sannadkii 2016-ka oo uu ahaa illaa $120 million.
Heshiiskan ayaa soo socday tan iyo 2016-kii waxaana uu si gaar ah uga shaqeen doonnaa arrimaha Tamarta, Macdanta, Korantada, waxbarashada sare, beeraha iyo arrimaha badda, sidaas waxaa ku warrantay wakaaladda AA.
Heshiiskan iskaashi ayaa dhigaya in Soomaaliya suuq ku yeelato Turkiga si ganacsiga Soomaaliya loo gaarsiiyo Yurub iyo Asia sidoo kale, Turkiga waxay qaadan donaan oo Suuq u yeeli donaan khayraadka Soomaaliya sida kalluunka, beeraha iyo xoolaha.
Turkiga iyo Soomaalya ayaa xoojiyey xiriirka ay lee yihiin tan iyo 2011-kii xilligaas oo madaxweynaha Turkiga Erdogan uu booqday caasimadda Muqdisho.
Bishii September ee la soo dhaafay, Turkiga waxa uu furay xarruntii ugu weyneed ee lagu tababbaro ciidan oo dibadda laga hirgaliyey taasoo laga dhisay Soomaaliya.
Xarruntan oo ku taalla Muqdisho, ayaa waxa dhismaheeda uu socday muddo labo sanno ah, waxa ay ku fadhiddaa in ka badan 4 square kilometers (1.54 square miles), waxaana awood u lee dahay in halkii marba ay ku tababbartaan in ka badan 1,500 askari, sida laga soo xigtay dowladda Soomaaliya.
posted on Saturday, January 13th, 18